Thuthukisa i-iTunes Podcast yakho nge-Smart App Banner | Martech Zone
Uma ufundile ukushicilelwa kwami ​​nganoma yisiphi isikhathi esingeziwe, uyazi ukuthi ngingumuntu othanda i-Apple. Izici ezilula ezinjengokuthi ngizochaza lapha ezingenza ngazise imikhiqizo nezici zazo.
Mhlawumbe uqaphele ukuthi lapho uvula isayithi eSafari ku-iOS amabhizinisi avame ukukhuthaza uhlelo lwawo lweselula nge I-Smart App Banner. Chofoza ku-banner, bese uyiswa ngqo ku-App Store lapho ungalanda khona uhlelo lokusebenza. Kuyisici esihle futhi kusebenza kahle ukukhulisa ukutholwa.
Okungahle ungakuqapheli ukuthi i-Smart App Banner nayo ingasetshenziselwa khangisa i-podcast yakho! Nakhu ukuthi kusebenza kanjani. Isixhumanisi sethu se-podcast yethu yile:
Sisebenzisa isihlonzi sezinombolo esivela ku-URL yethu, singangeza umaki we-meta olandelayo phakathi kwamathegi ekhanda kusayithi lethu:
Manje, njengoba izivakashi ze-iOS Safari zivakashela iwebhusayithi yakho kudivayisi ephathekayo, zilethwa ngesibhengezo osibona kusayithi lethu elingenhla. Uma bachofoza lokho, balethwa ngqo kwi-podcast ukuze babhalise!
Ngifisa impela ukuthi i-Android yamukele indlela efanayo!
Tags: uhlelo lokusebenza lwesibhengezoi-apulaitunesUkumaketha i-Podcastisibhengezo se-podcastsafariisibhengezo sohlelo lokusebenza oluhlakaniphilei-smartbanner